Malaashiyo reer Hiiraan ah oo la dagaalamay Alshabaab | Most Reliable News Source
Malaashiyo reer Hiiraan ah oo la dagaalamay Alshabaab
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qeybta 52–aad Axmed Maxamed Maxamuud Taredishe ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay shalay deegaan ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
General tareedishe ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan Shabaab isla markaana meydadka Al-Shabaab la keenay degmada Maxaas ayna dhawaan u soo bandhigi doonaan warbaahinta.
“Dagaalka waxa uu socday muddo ka badan 9 saacadood waxaana aan ku dilney 32 ka tirsan Al-Shabaab.”ayuu yiri Gererala Tredishe. Taliyaha ayaa xusay in markii hore uu dagaalka ka dhex bilowday Al-Shabaab iyo sidoo kale dadka degaanka.
Dagaalkan oo si gaar ah uga dhacay degaanka Bulacle ayaa intii uu socday dadka degaanka waxa ay garab ka heleen Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka oo ka kala yimid Gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Ma jiro war madax banaan oo xaqiijinaya tirada ku dhimatay dagaalka ka dhacay shalay deegana hoostaga degmada Maxaas.